कारबाहीपछि प्रचण्ड-नेपाललाई शान्ता चौधरीले भनिन्-पाहुनाले हामीलाई जा भन्ने हैसियत छैन ! - Jagaran Online
कारबाहीपछि प्रचण्ड-नेपाललाई शान्ता चौधरीले भनिन्-पाहुनाले हामीलाई जा भन्ने हैसियत छैन !
प्रचण्ड-नेपाल पक्षले नेकपाकी सचेतक शान्ता चौधरीलाई कारबाही गरेको छ ।
प्रचण्ड-नेपाल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले पार्टीका ७ जना नेतालाई कारबाही गरेको छ।
बुधबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले केन्द्रीय सदस्यहरू सुवासचन्द्र नेम्वाङ, शान्ता चौधरी, विशाल भट्टराई, महेश बस्नेत, सूर्य थापा, प्रभु साह र कर्ण थापालाई ६ महिनाका लागि निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको हो।
कारबाहीपछि जवाफ दिदै प्रचण्ड-नेपाललाई सचेतक शान्ता चौधरिले भनिन्- हामी हाम्रो घरमा शानदार रुपमा बस्छौं , घरलाई सुन्दर बनाउँछौं । पाहुना हुन आएकाले हामीलाई जा भन्ने हैसियत राख्न सक्दैनन ।